Robert Lewandowski Oo Ka Hadlay Go'anka Laga Sugayay Ee Mustaqbalkiisa
HomeWararka CiyaarahaRobert Lewandowski oo ka hadlay go’anka laga Sugayay ee Mustaqbalkiisa
Robert Lewandowski oo ka hadlay go’anka laga Sugayay ee Mustaqbalkiisa
September 22, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka 0
Weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa aaminsan inuu sii wadi karo horumarinta marka uu da ‘yahay, mana dareemayo baahida loo qabo inuu isku muujiyo horyaal kale oo ka baxsan Bundesliga.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee reer Poland ayaa hadlay Talaadadii ka dib markii uu aruuriyay abaalmarinta Kabta Dahabka ee Yurub isagoo ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan qaaradda ololaha 2020-21.
Lewandowski ayaa dhaliyay 41 gool oo cajiib ah 29 kulan oo Bundesliga ah si uu u dhaafo rikoorka Gerd Muller ee goolasha ugu badan hal xilli ciyaareed oo horyaalka Jarmalka ah.
Taasi waxay ahayd 11 gool in ka badan Lionel Messi oo ku guuleystay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyay ee LaLiga ee Barcelona iyo 12 ka badan Cristiano Ronaldo oo Serie A u dhaliyay kooxda markaas Juventus.
Ciyaaryahankii hore ee Borussia Dortmund ayaa lala xiriirinayay Real Madrid iyo Chelsea intii lagu jiray suuqii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga, laakiin kuma dagdago inuu ka tago Allianz Arena.
“Ma ahan inaan isku muujiyo horyaal kale mana jirto sabab aan uga tago kooxdeeda ” ayuu yiri .